people Nepal » कोरोना भाइरसको त्रासः फेसबुकको वार्षिक सम्मेलन समेत रद्द ! कोरोना भाइरसको त्रासः फेसबुकको वार्षिक सम्मेलन समेत रद्द ! – people Nepal
कोरोना भाइरसको त्रासः फेसबुकको वार्षिक सम्मेलन समेत रद्द !
Posted on February 28, 2020 by Durga Panta
एजेन्सी, १६ फागुन । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण फेसबुकले आफ्नो एक वार्षिक सम्मेलन रद्द गरेको छ ।
फेसबुकले क्लालिफोर्नियामा हुने भनिएको विकासकर्ता (डेभेलोपर) को वार्षिक सम्मेलन रद्द गरेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिँदै गएपछि फेसबुकले पछिल्लो निर्णय लिएको हो ।
फेसबुकले गत वर्ष आयोजना गरेको डेभेलोपर कन्फेरेन्समा विश्वभरबाट ५ हजार मानिस सहभागी भएका थिए । यस वर्ष पनि विश्वभरका डेभेलोपरहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यही मे ५ र ६ मा क्यालिफोर्नियाको सान होसमा विकासकर्ताको सम्मेलन हुने तय भएको थियो ।
तर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण उक्त सम्मेलन स्थगित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । सम्मेलनको सट्टा स्थानीय रुपमा गरिएका क्रियाकलाप, भिडियो र प्रत्यक्ष प्रसारित सामग्रीको कम्बो आयोजना गरिने फेसबुकका फ्लाटफर्म निर्देशक कोन्स्टान्टिनोस पापामिल्टियाडिसले बताए ।
‘कार्यक्रमको सट्टा कम्पनीले स्थानीय रूपमा गरिएको क्रियाकलाप, भिडियोहरू र प्रत्यक्ष प्रसारित सामग्रीको कम्बो आयोजना गरिने छ’, पापामिल्टियाडिसले भने ।
त्यस्तै फेकबुकका प्रवक्ताले रोयटर्ससँग कुराकानी गर्दै आफ्ना कर्मचारीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध पनि लगाएको बताएका छन् । फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चीन, दक्षिण कोरिया र इटलीको भ्रमण नगर्न भनेको ती प्रवक्ताले बताए । तर यात्रामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अस्थायी हुने पनि उनको भनाइ थियो ।
माइक्रोसफ्टले भने सियाटलमा मे महिनामा नै विकासकर्ताको सम्मेलन हुने बताएको छ । तर मार्चमा सान फ्रान्सिस्कोमा हुने भनिएको गेमिङ् सम्मेलन स्थगित गरिएको छ ।
यसैगरी अन्य साना कम्पनीहरुले पनि तय गरिएका आफ्ना कार्यक्रम रद्द गर्ने निणय लिइसकेका छन् । क्यालिफोर्नियास्थित कस्मेटिक सामग्री बिक्रेता सान्टा मोनिकाले आगामी हप्ताका लागि तय भएको नेतृत्व विकास सम्मेलन रद्द गरेको छ । ३ दिने सम्मेलनको सट्टा एक दिने अनलाइन भेला गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी प्रकोपको रुप लिन थालेपछि यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । बढ्दो चिन्ता र डरसँगै वाल स्ट्रीटको कारोबार छैटौं दिनमा पनि गिरावट आएको छ ।
विश्व बजारमा सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि कै खराब अवस्था देखिन थालेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र आपूर्ति चक्र अस्तव्यस्त भएपछि अमेरिका र युरोपमा आर्थिक मन्दीको त्रास देखिएको छ ।
बिहीबार अमेरिकाको शेयर बजारमा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । त्यस्तै शुक्रबार एसियाली शेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ ।